Kabtanka Man United Wayne Rooney oo seegaya kulanka Sunderland ee Premier League – Gool FM
(Manchester) 07 Abriil 2017 – Tababare Jose Mourinho ayaan markale heli doonin adeegga kabtanka kooxda Manchester United ee Wayne Rooney kulanka Premier League ee Axadda ay u safri doonaan naadiga Sunderland.
Kabtanka xulka qaranka England ayaa dhaawac Canqowga ah ku seegay kulankii Man United ay barbaraha 1-1 la gashay kooxdiisii hore ee Everton Talaadadii, sidoo kale waxaa uu dhaawacaan la maqnaan doonaa kulanka ay u safri doonto kooxdiisa Man United garoonka Stadium of Light.
Ashley Young ayaa ah ciyaaryahan kale oo Man United ka maqnaan doona kulankaas, kaddib markii bedel lagu sameeyey qeybtii labaad ciyaartii ay la dheeleen naadiga Toffees lagu naanayso, halka Juan Mata, Chris Smalling iyo Phil Jones ay la sii maqnaan doonaan dhibaatooyin waqti dheer ah.
Mourinho ayaa shirkiisa Jaraa’id suxufiyiinta ugu sheegay: “Rooney lama heli karo, Young waa dhaawac, warar dheeraad ah oo jirana malahan, maxaa yeelay Mata, Smalling iyo Jones horay ayaan uga hadalnay waxyaabaha ku saabsan dhaawacyadooda.”
Kooxda Sunderland ayaa halka ugu hooseysa ka hoggaaminaysa horyaalka Premier League, halka Man United ay fadhiso kaalinta 6-aad, isla markaana afar dhibcood ka dambaysa kaalinta afaraad oo ay ku jirto kooxda ay daris wadaagga yihiin ee Manchester City.